August 2012 - शखदा साहित्य
फेसबुकको साहित्यिक संसार
11:44 PM सम्प्रेषण
अचम्मको छ फेसबुकको संसार । यसले मानिसलाई चकित मात्र पार्दैन उत्तेजना, आक्रोश, खुसी, दुःखको ज्वारभाटाले लपटेर वल्लोछेउ र पल्लोछेउ पु¥याउँछ । असम्भवलाई सम्भव बनाउँछ, सम्भवलाई असम्भव । वर्षौ हराएकालाई भेट गराउँछ भने आन्द्रा नै गाँसिएकालाई अलग गराउँछ । परापूर्वकालमा वर्णित कुनै लोककथाको जादुई यन्त्रजस्तो । यसभित्र के छैन ? एउटा सानो सिंगो संसार छ । यसभित्र मानवीयता, अन्तर्गत पर्ने हास्य, विस्मात, दुःख, हाँसो, श्रृड्गार, त्रास, करुण, भयानक काव्य शास्त्रको नौवटै रस रहेको छुन्छ । त्यस्तै राजनिति, संस्कृति, कला, विज्ञान, प्रकृति, ईश्वर सबै अटेको हुन्छ ।
आजभन्दा पन्ध्रवर्षअघि नेपाली समाजमा मोबाइलको छाया पनि परेको थिएन । आजभन्दा सात वर्षअघिसम्म नेपाली समाज फेसबुकको जादुई संसारबाट धेरै टाढा थियो । विज्ञानक्षेत्रमा भएको प्रविधिको यो विकासले समाजलाई दिनपरदिन बदल्दै लगेको छ । हाल नेपाली समाजमा फेसबुकको सन्जालमा नलठिठनेको सख्या धेरै थोरै हुँदै गएको छ । यसमा पोस्ट हुने ताजा ताजा समाचार, अचम्म लाग्दा दृश्य, आफ्नो मनको कुन्ठा, हर्ष समाचार सबै पोस्ट गर्न पाइने हुनाले पनि यसको पे्रमीको सख्या दिन पर दिन बढ्दै गएको हो । म स्वयम पनि फेसबुकमा हराउने गर्दछु । कतिपय हास्यास्पद कुराहरुले मनको तनावलाई अर्कै संसारमा लगेर छोडिदिन्छ ।
एकाबिहानै के कुरामा हो मेरो मुडअफ भइदिन्छ । मेरो मुडअन गर्ने एउटै साधन भैदिएको छ त्यो हो फेसबुक संसार । कहिले फेसबुकको मेसेजमा आउने प्रशसकहरुको प्रशसाको पत्र त कहिले मित्रहरुको आउने आत्मीयताको मेसेजहरु त कहिले फेसबुकमा पोस्ट हुने मीठामीठा चुटकिलाहरु, गीत, गजल र विभिन्न जानकारीहरु । त्यसैले एकाबिहानै फेसबुक सुमसुमाउन पुग्छु म प्रेमीले प्रेमिकालाई सुमसुमाएझैँ । फेसबुकमा पोस्ट गरिएको यो एउटा चुकटिलाले खित्का छोडेर हसाउँछ मलाई ।
मलाई हाँस उठ्यो । फेसबुकको चमत्कारी लीला देखेर । यस्ता हजारौ कमेन्टहरु कहाँ थिएन होलान् पहिला । के त फेकबुकले नै जन्माएका हुन् त यी कमेन्टहरु ।
फेसबुकमा सबैभन्दा बढी आफ्नो भावना, विचार र सन्देशहरु सम्प्रेषण गर्नेमा मैले साहित्यकार तथा चलचित्रकर्मी प्रकाश सायमीलाई देखेको छु । उनको स्टाटस पढन लायक ज्ञानवद्र्धक, समसाययिक राजनीति र सामाजिक वेथितिलाई कडा व्यग्य हानेर लेखिएको हुन्छ ।
एक पल्ट उनले यस्तो लेखे
‘नेपाली महिला वास्वतमा नै नवचेतना र जागरणले भरिएका छन् तर के सबै महिलामा महिला आस्तित्वको वोध छ ? भारतको अयोध्यामा जन्मेको श्यामवर्णका रामको महिमा सम्मानमा रामनवमी मनाउँछन् तर जस्तै क्रान्तिकारी महिलाले पनि आजसम्म सीताजयन्ती मनाएको मैले थाहा पाएको छैन ।’
गोजी पनि खाली भयो लाग्यौ त्यो रिन
फेसबुकमा सबै खाले साहित्य पढन पाइन्छ । हल्काफुल्का साहित्यदेखि गम्भीर खालका साह्त्यििक लेख, रचना र गीत गजल पाइन्छन् । एउटा फेसबुककै मुक्तक
अर्को यो पदम राम्जालीको गजल करुणरसले भरिएको थियो –
आ“सु बने सागर
अ“ासु बने सागर, किनारा कतै देखिएन
पीडाको सागरमा डुबिरह,े मोती कतै भेटिएन ।
मृत्युस“ग जीवन साट्ने, चाहाना धेरै भयो
जीवनको पाइला स“गै पीडाले सधै पछ्याइरह्यो
पाइलास“ग छाया मेटियो तर पीडा कहिल्यै मेटिएन
यही ढुड्गामा बिसाएको थिए
फेसबुकमा धेरैजसो विदेशमा बस्ने नेपालीहरु भेटिन्छन । उनीहरु साहित्यमार्फत आफना प्रेमिकालाई यसरी सन्देश पठाउँछन् ।
अर्का विदेशी सर्जक अभागी कान्छा “गाउँले“ को यो मीठो गजल
लन्डन बसेर निरन्तर कविता विधामा कलम चलाइरहने एकजना कवि दुर्गाप्रसाद पोखरेलको कविता मलाई निकै उत्कृष्ट लाग्छन् । उनको यो कविताको जीवन दर्शनले भरिेको कविताबाट म निकै प्रभावित भए ।
राम्रा काम गर उनीहरुमा ईष्या र जलन हुनेछ
उत्साह भर्नेहरु कमै मिल्लान् काम गर्दा धेरै नखोज्नू
पछि ताली बनाउन आउँलान् काम बनेपछि खाज्नू
मीठो बोली देउ नमीठा नै भए पनि मान्छहरु
भोलि पस्कनेछन् तिम्रै बोली घरघरमा भान्छेहरु
मन राख्नु सदा स्वस्थ्य दःुख संताप हटदछ ।
फेसबुकमा विपरित लिगीको बेग्लै आकर्षण देखिन्छ । अझ केटीको फोटो छ भने लाइक गर्ने र कमेन्ट लेख्नेको धुइरो लाग्छ । यसले गर्दा कतिपयले केटीको फोटो राखेर फक आइडी पनि चलाएको पाइन्छ । फेसबुकमा सबैभन्दा चर्चित हुने स्टाटस भनेको राजनीति नै हुन्छ । राजनीतिप्रतिको वितृष्णालाई जनताहरुले विभिन्न किसिमको कार्टुन बनाएर र कविता बनाएर पोस्ट गरिेएको हुन्छ ।
विशेषत जेठ १३ गते संविधान बन्न नसकेको अवस्थामा जनताको आक्रोश थामिनसक्नु भएर फेसबुकमा पोखिएको थियो । कुनै गीत कविता र कार्टुन मार्फत नेताहरु र सभासदहरुलाई भन्नुसम्मको गाली गलौज गरिएको थियो । फेसबुकमा विशेष माओवादिको नेता प्रचन्ड र प्रधानमन्त्री बाबुरामको विभिन्न कार्टुनहरु बनाएर राखिएको पाइन्छ । राजनीतिलार्इृ कवितमा जनताले यसरी रिस पोखेको थिए–
ओलीजीको जिन्दगी दाउपेचमैै
फेसबुकमा राष्टियताप्रति तीव्र व्यग्ड्य हान्दै राष्ट्रिय गीतलाई यसरी प्यारोडी बनाएको पाएँ मैल–े
शान्ति छैन, संविधान छैन हरुवा छन् केवल
संविधान लेख्नै नसक्नेहरुको प्रतिगामीको नेपाल
फेसबुकले हाँसो खुसी मात्र दिने होइन कहिलेकाही नसोचको टेन्सन पनि हुन्छ । विभिन्न विचारधाराका मानिस हुने भएकाले विभिन्न सोच्दै नसोचेको टेन्सन हुने काम पनि हुन्छ । आफूले भनेको कुरालाई अरुले अर्कै अर्थलगाएर बुझिदिने, अरुले भनेको कुरा आफूले अर्कै अर्थ लगाएर बुझिएको हुनसक्ने हुन्छ । यसले अझ आफूलाई तनावमा राख्दछ । कतिपत व्यक्ति नराम्रो धारणा राखेको हुन्छन उनीहरुले फेक आइडी चलाएर आफूलाई जस्तोपायो त्यस्ते कमेन्ट पठाएको पनि हन्छ ।
नेपाली साहित्यमा फेसबुकको चर्चा गर्दा पेन लभर्स भन्ने ग्रुपको चर्चा गरिएन भने त्यो अधुरो रहन जान्छ । पेन लभर्सले नेपाली साहित्यको समाचार, जानकारी, साहित्यिक गतिविधिको फोटोहरु राखिएको हुन्छ । जसलाई सन्चालक किशोर पहाडीले निकै मेहेनत गरेको पाइन्छ । तर कहिलेकाही यस गु्रप नचाहिले तर्क विर्तक गरेको पाइन्छ भने कुनै कुनै समाचार पोस्ट नगर्नुपर्ने पोस्ट गरेको पाइन्छ । साहित्यिक क्षेत्रमा यो ग्रुपको महत्व निकै बढेको छ । त्यस्तै फेसबुकमा विभिन्न साहित्यिक वेवसाइडहरुको लिंक पनि प्रसस्त पढन र थाहा पाउन सकिन्छ । अर्कोतिर यो फेसबुकको जादुई संसारले अनेकौ जादुई लीला गर्छ, चमत्कार गर्छ, खुरापात गर्छ । कहिले मन्दिर जाँदै नजानेपनि फेसबुकमा इश्वरको भक्ति गरेको फोटो राखेर स्तुति भजन ट्याग गरेको पाइन्छ । फेसबुकले मानिसलाई कतिसम्मको वनावटी र देखावटी बनाएको छ भन्ने एउटा सानो घटना म यहाँ राख्न चाहन्छु । एकपल्ट गीतकार भीम विरागको देवहसान भएको खबर फेसबुक र साथीभाइ मार्फत थाहा भयो । एकजना साथीले “लौ आर्यघाट जाऔँ हामी पनि जाने ।” भन्नुभयो ।
“हामी एकछिनमा अरु साथीहरुसँग आउँछौ तपाई जादैगर्नुहोस् । ” भन्नुभयो । म पनि आफ्नो काम छाडि उँहालाई हार्दिक श्रद्धान्जली चढाउन आर्यघाट पुगे । त्यहा त कोही साहित्यकार हुनुहुन्थेन । मैले सोचेको थिए त्यहा टनाटन साहित्यकार हुनुहोला । तर उल्टो भयो । मैले एकदुई जनालाई फोन गरे कसैले थाहा नपाएको कुरा गर्नुभयो कसैले फुर्सद नभएको कुरा गर्नुभयो । पछि मलाई जाऔ भन्ने साथी पनि आउनुभएन । म घर फर्के । घर आएर यही मायवी फेसबुकमा घुम्न थाले । मलाई अचम्म लाग्यो फेसबुकमा गीतकार भीम विरागलाई श्रद्धान्जली दिनेको भीड देखेर । काठमाडौ बाहिरको त आउनुसक्नु हुन्न काठमाडौँ भित्रको कोही कोही एकदुई जना मात्र भएनि आउनु पर्ने हो नि भन्ने लाग्यो । अनि फेसबुकले हामीलाई कति औपचारिक बनाइदिएछ भनेर नमज्जा लाग्यो ।